Find Kitchen Design Services at Dubai on RealtyWW Info
Find Kitchen Design Services at Dubai
I-Dubai (doo-BY; IsiArabic: دبي Dubay, Gulf Arabic: I-Arabhu yokubiza: [dʊˈbɑj]) sesona sixeko sikhulu nesinabantu abaninzi kwi-United Arab Emirates (UAE). Kunxweme olusempuma-mpuma lwePersian Gulf, yidolophu enkulu ye-Emirate yaseDubai, yenye yeemazisi ezisixhenxe ezakha ilizwe.I-Dubai yidolophu yehlabathi kunye neshishini lokuzonwabisa kuMbindi Mpuma. Ikwayisithuthi esikhulu sezothutho sehlabathi kubakhweli kunye nemithwalo. Ingeniso yeoyile incedise ukukhawulezisa uphuhliso lwedolophu, ebisisele isisikhulu kakhulu se-mercantile hub, kodwa iindawo zokugcina ioyile zaseDubai zincitshisiwe kwaye amanqanaba emveliso aphantsi: namhlanje, ngaphantsi kwe-5% yemali ye-emirate ivela kwioyile. Iziko elikhulayo kurhwebo lwengingqi kunye nolwamanye amazwe ukusukela ekuqaleni kwenkulungwane yama-20, uqoqosho lweDubai namhlanje luxhomekeke kwimali evela kurhwebo, ukhenketho, ukuhamba ngenqwelo moya, ukuthengisa izindlu, ukuthengiswa kwezemali, kunye neenkonzo zezimali.I-Dubai itsala ingqalelo yehlabathi ngeeprojekthi ezinkulu zokwakha kunye neminyhadala yemidlalo, ngakumbi Esona sakhiwo sikhulu emhlabeni, yiBurj Khalifa. Ukusukela ngonyaka ka-2012, iDubai yayiyeyona dolophu ibiza kakhulu kuMbindi Mpuma. Ngo-2014, amagumbi ehotele aseDubai abalwa njengeyesibini yexabiso eliphantsi emhlabeni.
Ikhitshi ligumbi okanye yinxalenye yegumbi elisetyenziselwa ukupheka kunye nokulungiselela ukutya kwindawo yokuhlala okanye kwindawo yezorhwebo. Ikhitshi lanamhlanje lokuhlala eliphakathi lihlala nesitovu, isinki enamanzi ashushu nabandayo ashushu, esiqandisi, kunye neekhitshi zekhitshi kunye neekhitshi zekhitshi ezilungiselelwe ngokwendlela emiselweyo. Amakhaya amaninzi anevumba le microwave, isitya sokuhlamba kunye nezinye izixhobo zombane. Eyona misebenzi iphambili yekhitshi kukugcina, ukulungisa kunye nokupheka ukutya (kunye nokugqiba imisebenzi enxulumene nokuhlamba isitya). Igumbi okanye indawo inokusetyenziselwa indawo yokutyela (okanye izidlo ezincinci ezifana nesidlo sakusasa), ukuzonwabisa kunye nokuhlamba iimpahla. Uyilo kunye nokwakhiwa kweekhitshi kwintengiso enkulu kwihlabathi liphela. Iikhitshi zorhwebo zifumaneka kwiivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iihotele, izibhedlele, amaziko emfundo kunye nendawo yokusebenzela, indawo yokuhlala amajoni, kunye namaziko afanayo. Ezi khitshi zikhulu ngokubanzi kwaye zixhotywe ngezixhobo ezikhulu nezinzima kakhulu kunekhitshi lokuhlala. Umzekelo, ivenkile yokutyela enkulu inokuba nefriji enkulu yokuhamba kunye nomatshini omkhulu wokuhlamba isitya. Ngamanye amaxesha izixhobo zekhitshi zorhwebo ezinjengeesinki zorhwebo zisetyenziswa kusetyenziso lwendlu njengoko zinikezela ngokulula kokusetyenziswa kokulungiselela ukutya kunye nokuqina okuphezulu.kwamazwe aphuhlileyo, amakhitshi entengiso ngokubanzi aphantsi kwemithetho yezempilo yoluntu. Bahlolwa rhoqo ngamagosa ezempilo kawonke-wonke, kwaye banyanzelwa ukuba bavale ukuba abahlangabezani neemfuno zempilo ezigunyaziswe ngumthetho.